Lasitra ao an-trano, bobongolo ao an-dakozia, bobongolo vata - HEYA
Heya Mould dia manizingizina amin'ny famokarana lasitra plastika avo lenta sy avo lenta, izay mora ampiasaina sy voatazona ho an'ny mpanjifa.
Heya bobongolo dia afaka manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanatanterahana mahomby ny vahaolana namboarina ho azy manokana sy vahaolana iray.
Heya Mould dia hamolavola sy hamolavola vokatra sy bobongolo isaky ny fangatahan'ny mpanjifa hanampy azy ireo hitahiry ny vidin'ny tetikasa vaovao, hahatonga ny orinasany hahazo tombony sy vokatra avo kokoa.
dia efa mandroso
Heya bobongolo dia mampiasa fitaovana fanodinana mandroso isan-karazany, atambatra amin'ny traikefa manan-karena amin'ny fanaovana lasitra plastika, mamantatra lasitra mety sy milamina kokoa ho an'ny mpanjifa.
Dinika momba ny tetikasa
HEYA MOLD dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana lasitra plastika mihoatra ny 10 taona, toy ny bobongolo ao an-tokantrano, bobongolo ao an-dakozia, bobongolo appliace ao an-trano, lasitra indostrialy sy fambolena sy ny sisa. Manomboka amin'ny fanodinana tsara ny volo vita amin'ny tinny isika, miaraka amin'ny "fahafaham-pon'ny mpanjifa, fanavaozana maharitra, toetra maha olona. fanamboarana sy fandrosoana ara-potoana ”ho sanda fototra, manolotra lasitra plastika avo lenta ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny vahaolana bobongolo tokana.
Inona no atao hoe lasitra?
Inona no atao hoe lasitra? Andiana lasitra feno ho an'ny famokarana vokatra vovoka manokana amin'ny alàlan'ny fanindriana na famerenana amin'ny laoniny. Ho fanampin'izany, ny fanohanana ny bobongolo dia antsoina koa hoe base mould. Ohatra, ny milina fanariana maty dia manambatra sy manamboatra ny faritra maro amin'ny bobongolo araka ny r ...
Inona avy ireo sokajy valo amin'ny lasitra tsindrona?
(1) bobongolo tsindrona tsipika tokana rehefa nosokafana ny bobongolo dia misaraka ny bobongolo mihetsika sy ny bobongolo miorina, ka ny ampahany plastika dia esorina, izay antsoina hoe bobongolo tokana fisarahana ary antsoina koa hoe bobongolo roa sosona . Io no endrika bobongolo tsindrona tsotra sy tsotra indrindra. Izany c ...
Fametahana tsindrona plastika
Ny fihenan'ny tsindrona plastika dia iray amin'ireo fananana rehefa mitete ny hafanan'ny material. Ny tahan'ny refin-tsindrona atsindrona dia ilaina amin'ny famaritana ny refin'ny asa farany. Ny sanda dia manondro ny habetsaky ny fihenan-dàlana asehon'ny sangan'asa aorian'ny nanesorana azy tamin'ny ...